Tsirim-Panantenàna Amin’ny Famerenana An’i Dominika Amin’ny Laoniny Taorian’ny Rivodoza Maria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2017 3:25 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Português, Español, 繁體中文, Français, Ελληνικά, عربي, English
Dikasary avy amin'ny horonanan-tsary fohy “Dominica on the Move” avy amin'i Yuri A. Jones.
Anatin’ny ezaka fanarahana ny fitantaran'ireo median'olontsotra ny fanantenana sy faharetana taorian’ny vanim-potoanan’ny rivodoza 2017 tao Atlantika izay nandrava nosy marobe tao amin’ny tangoronosin’i Karaiba, dia nanao fifanaraham-piarahamiasa tamin’ny Fikambanana Covela sy ny Fikambanana'ireo Fanjakana Any Karaiba Atsinanana (OECS) ho an'ny hetsika Feon'i Karaiba.
Tamin'ny alàlan'io tetikasa io, dia niangavy ireo mpisera amin'ny haino aman-jery sosialy manerana ny faritra izahay mba hametrana anaty tenifototra ny zavatra iainany toy ezaka fanolorantenan-dry zareo amin'ny asa fanarenana ho amin'ny laoniny. Raha mbola lohateny lehibe mahazatra ny loza voajanahary, dia misy ihany koa ireo tantara mila jerena momba ny fizotry ny famerenana amin'ny laoniny– tantaranà tanjaka manome aingam-panahy, tantaranà fahavononana sy hatsaram-panahy.
Iray amin'ireo tantara farany izay nanintona ny masonay ilay avy amin'ny vondrona Facebook Embrace Dominica. Pejy natokana ho an'ny fitsidihana sy ny fizahantany izy io ary mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo voajanahary ao amin'ny nosy taorian'ilay rivodoza mpandrava Maria.
Nandritra ny roa volana farany dia nizara lahatsary ilay pejy, izay maneho fa “tsy nitandro hasasarana ” ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana “mba hiantohana ilay fahatsapana ny fiainana ho toy ny isanandro manerana ny nosy”, isan'izany ny tantaran'ilay orinasa izay nanolotena mba hanangana indray sekoly fanabeazana fototra fito sy trano fonenana an-jatony.
Ankasitrahan‘ilay pejy ihany koa ny fanohanana azon'i Dominika avy amin'ireo Karaibiana manodidina azy, ary alefany mitsitapitapy ireo sarin'ny ” toeram-pamonjena”, ahitàna ireo valan-javaboahary voaavotra.
Fa azo antoka fa ny iray amin'ireo mampihetsi-po indrindra ireo dia horonantsary fohy nampakarin'i Yuri A. Jones ao amin'ny Embrace Dominica, izay novokarina teo anelanelan'ny volana aprily (talohan'ny rivodoza, lahatsary maneho ny hakanton'ny natioran'ny nosy) sy ny volana septambra 2017 (taorian'ilay rivodoza).
Noresahan'ilay mpanao horonantsary ao amin'ny bilaoginy ireo dingana :
Tiako ho naseho ireo karazana endriky ny natiora ao Dominika, toy ireo renirano, tendrombohitra ary torapasika[…] tiako ihany koa ny nanasongadina ny vahandanitra dia nampiasaiko indray ny sarin'ny Grand Bay ary naka ny dikasarin'ny ampahany vaovao vitsivitsin'ny toerana tany mena filalaovana tennis-n'i Lindo Park (2:30) sy ny farihin'i Freshwater aho.
Nefa avy eo, tonga ny rivodoza — Irma sy Maria hoy i Jones nanohy :
Tsy nandalo tany Dominika ny rivodoza Irma, nefa mbola tsapanay tamin'ny herin'ny fifofofofon'ny rivotra sy ny fanonjan'ny ranomasina ny fiantraikany. Azoko noraisina tanaty ampahany roa miavaka tsara ireo fiantraikany ireo.
Ny voalohany dia nalaina tany The Morne, fijery avy eny ambony ny renivohitra (0:54). Ny ilany havanan'ny sary dia manaome hevitra anao ny momba ny hamafin'ny rivotra tamin'izany fotoana. Ilay faharoa dia tany Bayfront akaikin'i Fort Young Hotel (1:33). Raha tsy nahalàla aho, dia mety ho nambarako hoe ny sarin'ny tafio-drivotry ny ranomasimbe Atlantika fa tsy ilay ranomasina tony mahazatra aoi Karaiba.
Tsy dia tsara vintana loatra izahay tamin'ny rivodoza Maria. Ny Alatsinainy 18 Septambra, namely anay tamin'ny maridrefy sokajy faha-5 ilay tafiotra, maherin'ny 165 km isanora ny herin'ny rivotra nentiny, ary 9 km/o ny hafainganam-pandehany. Ny fandehany miadana niaraka tamin'ny herin'ny rivotra nentiny ary ny oram-batravatra no tena nandrava an'i Dominika.
Tsy nisy iray izay tsy voakasika. Eny, fa na ireo niomana fatratra aza dia tsy afa-niala.
Alina no namelezan'ilay rivodoza ka tsy afaka nahazo sarin'ny dingan'io faharavana io aho. Angamba zavatra iray tsara izany, satria azoko antoka fa raha niditra antoandro ilay rivodoza, dia maro ny olona azom-panahy hivoaka tany ivelany. Angamba maro no naratra ary mety ho betsaka ny maty.
Eo ho eo amin'ny ampahatelon'ny zavatra hita ao amin'ny Dominica On The Move no zava-nisy nandritra na taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Maria. 1:56 avy any aloha, ho hitanao ny fahasamihafàna lehibe eo amin'ny tontolo taza-maso sy ny fiovany taorian'ilay tafiotra.
Ity horonantsary ity dia tsy isalasalàna fa iray amin'ireo zava-bita tsara indrindra amin'ny diako amin'ny maha-mpakasary. Sary 10.000 mahery sy ora tsy voatanisa ( teny an-kianja sy taorian'ny famokarana) no narindra tsara sy natambatra ho ao anatinà lahatsary manana kalitao matihanina, maharitra 3 minitra, manana hatsaràn-tsary 4K.
Eo am-panomanana sahady ny horonantsary fohy manaraka aho, izay antenaina fa hampiseho ny fiverenan'ny maitso mandrobona amin'ny tontolo tazan'ny masontsika.
Asa tsara no ataon'ilay lahatsary amin'ny fanehoana ny hakanton'ny tontolo tazamason'i Dominika talohan'ny tafiotra, ka mahatonga ireo sary taorian'ny fandalovan'ny rivodoza ho sarotra ekena. Fantatry ny mpijery avy hatrany, amin'ny fomba azo tsapain-tànan, ny zavatra very teo amin'ny firenena sy ny fahorian'ny mponina.
Mbola mitohy ny ezaka fanarenana, miaraka amin'ny fanadiovana ireo valan-javaboahary sarobidy. Ny sampan-draharahan'ny fizahantany ao an-toerana aza dia manome ” andianà fizahantany fanampiana an-tsitrapo “ ho an'izay rehetra te-hanampy amin'ny ezaka fanarenana sy famerenana amin'ny laoniny taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Maria.